Rooble oo farriin u diray dadkii ka barakacay Muqdisho 'oo gaaraya 60,000 illa 100,000'
Ra'isul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ugu baaqay dadkii ka barakacay qalelaasihii maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho inay dib ugu soo noqdaan guryahooda.
"Ciidamada ammaanka waxaan farayaa inay shacabka u fududeeyaan inay guryahooda iyo ganacsigooda ku soo noqdaan" ayuu yiri Ra'isul Wasaare Rooble oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka.
"Waxaa naga go'an in shacabkeennu helo nabad iyo Xasillooni" ayuu Rooble sii raaciyay.
Ra'isul Wasaare Rooble ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku ayiday go'aankii dowlad goboleeyada Galmudug iyo Hirshabeelle ay diideen muddo kororsiga hay'adaha dowladda, taas oo falanqeeyeyaasha siyaasadda ay ku tilmaameen inuu ahaa mid hoos u dhigay xiisadda colaadeed ee maalmihii la soo dhaafay ka taagneyd magaalada Muqdisho.
"Waxaan mar kale ku celinayaa sida aan uga xumahay xiisadaha colaadeed ee ka jiray magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyo natiijada xun ee ka dhalatay , taas oo sababatay barakaca shacab badan oo danyar ah" ayuu ku Ra'isul Wasaare Rooble ku yiri bayaankii uu shalay soo saaray.
Qalelaasihii ka jiray magaalada Muqdisho ayaa sababay in dad u badanaa carruur iyo haween ka soo jeeda qoysas danyar ah ay ka qaxeen guryahooda,iyadoo degmooyinka ugu badan ee laga qaxay ay ahaayeen Hodan iyo Howl-wadaag, kuwaas oo ay ka jireen dhaq-dhaqaayada ugu badan ee ciidan.
Dhinaca kale bayaan ka soo baxay xaafiiska Isuduwaha Gargaarka Bini'aadanimo ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay inay ka walaacsanyihiin barakaca baahsan ee ka jira Muqdisho.
"Waxaan aad uga walaacsanahay xaaladda ammaanka ee Muqdisho ee sii xumaaneysa" ayuu yiri kusimaha Isuduwaha Gargaarka Bini'aadaminimo ee Soomaaliya Caser Arroyo.